ကိုယျဝါသနာမပါတဲ့သငျတနျးတှကေို သူမြားတတျတိုငျးလိုကျတတျပွီးအခြိနျဖွုနျးနတေုနျးပဲလား ? ပညာရေးကို အရေးပေးတဲ့အခုလိုအခြိနျမှာ သငျတနျးတှတေတျပွီးရသမြှပညာတှကေို သငျယူတာကအရမျးကိုကောငျးမှနျတဲ့ရညျရှယျခကျြဆိုပမေဲ့လဲ ဒီသငျတနျးတှကေိုဘာကွောငျ့တတျခငျြလဲဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြမရှိပဲတတျနခွေငျးသညျ အလဟဿ အခြိနျတှဖွေုနျးနခွေငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။အခုခတျေနောကျပိုငျးမှာအရာကိုပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိလာပွီး အမွငျတှကေယျြလာကွတယျ သငျယူဖို့ကွိုးစားလာကွတယျ။ ဒါပမေဲ့သငျတနျးတှတေဈခုပွီးတဈခုတာ ပွီးသှားတယျအခြိနျသာကုနျသှားတယျတကယျတမျးရလိုကျတာကဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒါဟာသငျ့ရဲ့အခြိနျတှနေဲ့ငှတှေကေိုအလဟဿ ဖွုနျးတီးလိုကျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့သငျတနျးတဈခုခုတတျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျနဲ့ကိုကျညီတဲ့သငျတနျးတှရှေေးခယျြတတျဖို့ ဘယျလိုအခကျြတှသေိထားသငျ့လဲ ဆိုတာလေးပွောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) လိုအပျလို့လား ----- လိုခငျြလို့လား
ကြှနျတျောတို့တတျနတေဲ့သငျတနျးတိုငျးကလို လို့မဟုတျပါဘူး။ တခြို့ကဒါကိုဘာကွောငျ့တတျနမှေနျးမသိပါဘူး။ ဒါပွီးရငျဘာလုပျမယျဆိုတာသခြောမသိပဲနဲ့ သူမြားတတျတိုငျးလိုကျတတျပွီး လမျးပြောကျနတေဲ့လူငယျတှရှေိပါတယျ။ ဒါကသငျ့အတှကျအခြိနျဖွုနျးရာကပြါတယျ။ လိုအပျလို့တတျတယျဆို ဒီကနအေဖွတှေရေမယျ၊ ဝါသနာကွောငျ့တတျတယျဆိုရငျ သငျ့ဝါသနာကိုအကောငျအထညျဖျောနိုငျမယျ ဒါကပွဿနာမရှိပါဘူး။ ဘာကွောငျ့တတျနမှေနျးလဲမသိ ရညျရှယျခကျြလဲမရှိရငျတော့အခြိနျဖွုနျးနမေိပွီဆိုတာသတိရပါ။
သငျတနျးသငျတနျးတဈခု တတျဖို့ရှေးခယျြလိုကျပွီဆိုရငျ ကိုယျ့စှမျးရညျကိုတကယျမွှငျ့တငျပေးနိုငျမယျ့ သငျတနျးကြောငျးကိုဘယျလိုရှေးခယျြရမလဲဆိုတာ အရေးပါလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့သငျတနျးမှာဘာတှသေငျကွားပေးလဲဆိုတဲ့ Course တှကေိုသခြောလလေ့ာဖို့ လိုပါတယျ။ ဥပမာသငျက computer basic တတျခငျြတယျဆိုသငျတနျးတဈခုနဲ့တဈခုက Basic level ခငျြးတူပမေဲ့ သငျပေးတဲ့ Course တှေ၊ သငျကွားမှုပုံစံတှေ မတူကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့အတနျးတဈခုမှာသငျပေးတဲ့ Course outlines တှကေဘာတှလေဲ ။ သငျပေးမဲ့ဆရာကတော့ဘယျလိုပုံစံမြိုးလဲ ဆိုတာအသစေိတျလလေ့ာရပါပမယျ။ သငျတနျးပွီးတဲ့အခါဘယျလိုအထောကျအပံ့မြိုးရနိုငျလဲဆိုတာကိုပါ လလေ့ာထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသငျတနျးပွီးတဲ့အခါ ဘယျလိုအခှငျ့အရေးမြိုးရနိုငျသလဲဆိုတာကိုပါ တှကျခကျြနိုငျမှာပါ။
သငျတနျးတဈခုတတျတော့မယျဆိုရငျ အရငျဆုံးကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျ နဲ့ကိုယျကဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာအရငျဆုံးစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျကြှနျတျောတို့ပတျဝနျးကငျြမှာသငျတနျးမြိုးစုံကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒီလိုရှိလာတာဟာကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရညျရှယျခကျြမရှိပဲသငျတနျးမြိုးစုံလိုကျတတျနေ ခွငျးကကိုယျ့ကိုယျကို လမျးပြောကျအောငျလုပျနတောနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကွောငျ့သငျက Designer တဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ design နဲ့ပတျသကျတဲ့သငျတှကေိုတတျရောကျပွီးကိုဖွဈခငျြတဲ့ပနျးတိုငျ ကိုသှားခွငျးကပိုပွီးထိရောကျပါလိမျ့မယျ။
လူငယျတျောတျောမြားက သငျတနျးတှအေမြားကွီးတတျပွီး ဘာမှဖွဈမလာတဲ့အကွောငျးအရငျးကအဆုံးထိမလုပျနိုငျာကလို့ပါ။ တဈခုခုကိုစတငျလလေ့ာတော့မယျဆိဆုရငျ သငျယူရမယျ၊ လကေ့ငျြ့ရမယျ၊ အဆုံးထိလြှောကျရမယျ ဒါမှတကယျတတျမွှောကျပွီးအကြိုးထူးလာမှာပါ။ အဆုံးထိမလုပျနိုငျပဲ တဈဝကျတဈပွတျ လကျလြှော့လိုကျမယျဆိုရငျ သငျ့ရဲ့အခြိနျတှေ ငှတှေအေလကားဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ဘယျအရာမဆို ဇှဲရှိရှိနဲ့ အဆုံးထိလုပျနိုငျဖို့တော့လိုအပျပါတယျ။
ကိုယ်ဝါသနာမပါတဲ့သင်တန်းတွေကို သူများတတ်တိုင်းလိုက်တတ်ပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတုန်းပဲလား ? ပညာရေးကို အရေးပေးတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ သင်တန်းတွေတတ်ပြီးရသမျှပညာတွေကို သင်ယူတာကအရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုပေမဲ့လဲ ဒီသင်တန်းတွေကိုဘာကြောင့်တတ်ချင်လဲဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲတတ်နေခြင်းသည် အလဟဿ အချိန်တွေဖြုန်းနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာအရာကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိလာပြီး အမြင်တွေကျယ်လာကြတယ် သင်ယူဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့သင်တန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတာ ပြီးသွားတယ်အချိန်သာကုန်သွားတယ်တကယ်တမ်းရလိုက်တာကဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အချိန်တွေနဲ့ငွေတွေကိုအလဟဿ ဖြုန်းတီးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်တန်းတစ်ခုခုတတ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သင်တန်းတွေရွေးချယ်တတ်ဖို့ ဘယ်လိုအချက်တွေသိထားသင့်လဲ ဆိုတာလေးပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) လိုအပ်လို့လား ----- လိုချင်လို့လား
ကျွန်တော်တို့တတ်နေတဲ့သင်တန်းတိုင်းကလို လို့မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကဒါကိုဘာကြောင့်တတ်နေမှန်းမသိပါဘူး။ ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသေချာမသိပဲနဲ့ သူများတတ်တိုင်းလိုက်တတ်ပြီး လမ်းပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိပါတယ်။ ဒါကသင့်အတွက်အချိန်ဖြုန်းရာကျပါတယ်။ လိုအပ်လို့တတ်တယ်ဆို ဒီကနေအဖြေတွေရမယ်၊ ၀ါသနာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုရင် သင့်ဝါသနာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ် ဒါကပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်တတ်နေမှန်းလဲမသိ ရည်ရွယ်ချက်လဲမရှိရင်တော့အချိန်ဖြုန်းနေမိပြီဆိုတာသတိရပါ။
သင်တန်းသင်တန်းတစ်ခု တတ်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်စွမ်းရည်ကိုတကယ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် သင်တန်းကျောင်းကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ အရေးပါလာပါပြီ။ ဒါကြောင့်သင်တန်းမှာဘာတွေသင်ကြားပေးလဲဆိုတဲ့ Course တွေကိုသေချာလေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာသင်က computer basic တတ်ချင်တယ်ဆိုသင်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုက Basic level ချင်းတူပေမဲ့ သင်ပေးတဲ့ Course တွေ၊ သင်ကြားမှုပုံစံတွေ မတူကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အတန်းတစ်ခုမှာသင်ပေးတဲ့ Course outlines တွေကဘာတွေလဲ ။ သင်ပေးမဲ့ဆရာကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ဆိုတာအသေစိတ်လေ့လာရပါပမယ်။ သင်တန်းပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုအထောက်အပံ့မျိုးရနိုင်လဲဆိုတာကိုပါ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသင်တန်းပြီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်သလဲဆိုတာကိုပါ တွက်ချက်နိုင်မှာပါ။
သင်တန်းတစ်ခုတတ်တော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင် နဲ့ကိုယ်ကဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာအရင်ဆုံးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသင်တန်းမျိုးစုံကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုရှိလာတာဟာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲသင်တန်းမျိုးစုံလိုက်တတ်နေ ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကို လမ်းပျောက်အောင်လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင်က Designer တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တွေကိုတတ်ရောက်ပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင် ကိုသွားခြင်းကပိုပြီးထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။
လူငယ်တော်တော်များက သင်တန်းတွေအများကြီးတတ်ပြီး ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အကြောင်းအရင်းကအဆုံးထိမလုပ်နိုင်ာကလို့ပါ။ တစ်ခုခုကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိဆု၇င် သင်ယူရမယ်၊ လေ့ကျင့်ရမယ်၊ အဆုံးထိလျှောက်ရမယ် ဒါမှတကယ်တတ်မြှောက်ပြီးအကျိုးထူးလာမှာပါ။ အဆုံးထိမလုပ်နိုင်ပဲ တစ်ဝက်တစ်ပြတ် လက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အချိန်တွေ ငွေတွေအလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်အရာမဆို ဇွဲရှိရှိနဲ့ အဆုံးထိလုပ်နိုင်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
source: live the dream
Read times Last modified on Thursday, 19 March 2020 14:31
အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ ဘာလို့အရာရာ top ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့
"ဘောလုံးအားကစားတွင် သာမက ပညာရေးမှာပါ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်ခဲ့သူများ"